> Electronics>DeLonghi F 26215 Fryer( White )
Reference F 26215
Oil capacity (max) (l): 2,3
Rated voltage/Frequency (V~Hz): 240~50/60
External dimensions (wxdxh) (mm): 270x305x260
De'Longhi unique fryer enables you to fry the tastiest snacks and meals with less fat thanaconventional fryer, by using little oil. De'Longhi fryer with innovative technology also creates less smell than conventional fryers, it is easy to clean, safe and economical for your daily use.The removable food basket is dishwasher safe for easy cleaning. De'Longhi fryer saves you and your home from the smell of fryed oil compared toaregular fryer. This product is available now at Shop.com.mm online shopping mall.
De'Longhi အမှတ်တံဆိပ်မှထုတ်လုပ်လိုက်သည့် Fryer များတွင် သာမန်အကြော်အိုးများနှင့်မတူ တစ်မူထူးခြား၍ မြန်ဆန်သောနည်းပညာက ဆီပါဝင်မှုကို သတ်မှတ်ထားသောရာခိုင်နှုန်းထိ လျှော့ချပေးနိုင်သဖြင့် အသားကင်ခြင်း၊မုန့်ဖုတ်ခြင်း၊ ကြွတ်ကြွတ်ကြော်စားခြင်း များကို အရသာအရှိဆုံးနှင့် လုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညှော်နံ့ထွက်ခြင်းမှ လျှော့ချပေးကာ သန့်စင်ရလွယ်ကူပြီး လျှော့ဖြစ်ခြင်းများမရှိသည့်အတွက် သင့်နေ့စဉ်လူနေမှုဘ၀အတွက် ဆောင်ထားသင့်သည့် ပစ္စည်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ De'Longhi Fyer တွင်ပါဝင်သော ခြင်းလေးမှာလည်း စေးကပ်ခြင်းမရှိဘဲ အလွယ်တကူဖြုတ်၍ ဆေးကြောနိုင်ပါတယ်။ သာမန်အကြော်အိုးများနှင့်ယှဉ်လျှင် ဆီကြော်အနံ့များမထွက်များသည့်အတွက် မီးဖိုချောင်အတွင်း ညှော်နံ့များစွဲခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပါတယ်။ ယခုပစ္စည်းအား Shop.com.mm online shopping mall တွင် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။